स्वस्थ जीवनका आधार – Hamrosagarmatha.com
स्वस्थ जीवनका आधार
आज हामीलाई हाम्रो जिब्रोले पंगु बनाइदिएको छ । हामी जीवनका लागि भन्दा जिब्रोकालागि बाँचेका छौं । हामीले पढेर, हाकिम भएर, ठूलो मान्छे भएर पनि आज जिब्रो माथि नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी आफैं इन्द्रियका दास भएर पनि अरुमाथि मालिक बन्ने सपना देख्न भने छोड्दैनौं । हाम्रो जिब्रो अनावश्यक नुन, खुर्सानी, मसला, अमिलो, अजिनो मोटो लगायतका पदार्थको प्रयोगका कारण संवेदनहीन भएको छ । दैनिक जसो मासुको आहारले हामी सागसब्जीको स्वाद थाहा नपाउने भएका छौं ।
हामी सबैलाई आफू लामो आयु बाँच्ने चाहना हुन्छ । लामो आयु पनि स्वस्थपूर्वक बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वभाविकै हो । तर मानिसमा आएको सुखी भावनाले उसको जीवनशैली नै परिवर्तन गराएको छ । आजको मान्छे काम नगरी, सुख सयलका साथ, मोजमस्ती गर्दै, मिठो मिठो खाँदै, शरीरलाई कुनै दुःख नदिइ बाँच्न चाहन्छ । तर हाम्रो शरीरको बनावट त्यस्तो छैन । हाम्रा शरीरका सबै अंग प्रत्यंगहरु नियमित रुपमा क्रियाशील वा गतिशील हुनुपर्दछ, शरीरले थेग्न सक्ने वा सजिलै पचाउन सक्ने खालका खाना मात्र खानुपर्दछ र मात्र शरीरका अंगहरुले आफ्नो नियमित कार्य सम्पादन गर्न सक्दछन् । अन्यथा बनेका अंग प्रत्यंगहरु कामै नलाग्ने भई रोगी हुनथाल्छन् र हाम्रो शरीर पनि स्वतः रोगी हुन्छ । यदि हामी सदा निरोगी भई बाँच्न चाहन्छौं भने हामीले आजैदेखि हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । जीवनशैली भनेको के हो र यसमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा नै यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
यस संसारमा जन्मिएपछि बिस्तारै मान्छे भरिन थाल्दछ, अर्थात उसमा सामाजिक मान्यता, संस्कार, खानपान अनि रहनसहनको शैलीको प्रभाव पर्न थाल्दछ । त्यसपछि उसले अस्वस्थ रहने बानीको शुरुवात गर्दछ । मान्छेको शरीर जन्मजात शाकाहारी शरीर हो । हाम्रो पाचनसंयन्त्र मसालेदार र ज्यादा बोसोयुक्त पदार्थलाई भोजनका रुपमा स्वीकार्न नसक्ने खालको छ । सागपात र सुपाच्य भोजन मान्छेको शरीर संयन्त्रका आवश्यकता हुन् । शरीरको यही संरचनालाई ध्यानमा राखेर हामीले भोजन ग्रहण गर्ने बानीको विकास ग¥यौं भने हामी स्वस्थ हुन्छौं । स्वास्थ्य नै सम्पूर्ण खुशी र आनन्दको एकमात्र स्रोत हो । तर हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्दा वा आयातित जीवनशैली अपनाउँदा हामीलाई यस्तो जीवनशैलीले निकै धेरै रोगहरू दिएर गएको छ । जुन दिनदेखि हामी शारीरिक र मानसिक अनुशासनलाई उपेक्षा गरी अराजक जीवनशैली अपनाउन पुग्दछौं, त्यस दिनदेखि हाम्रो अस्वस्थताको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ ।
हाम्रो जीवनशैलीले भन्छ— दैनिक स्नान गर, मलमूत्रको नियमित विसर्जनका लागि सुपाच्य र सात्विक भोजनमा जोड देऊ, शरीर र मस्तिष्कमा उत्तेजना बढाउने पिरो, अमिलो, अधिक मसलादार, मादक पदार्थ सेवन नगर । चुरोट, बिँडी, सुर्ती, रक्सी आदि भुलेर पनि ग्रहण नगर । पानी प्रशस्त पिउने गर । नियमित योग, ध्यान, आसन, प्राणायाममा समय खर्च गर । ईश्वरप्रति आस्थावान बन र सबै प्रकारका सांसारिक भय, त्रास र तनावबाट मुक्त रहने प्रयास गर ।
आज हामीलाई हाम्रो जिब्रोले पंगु बनाइदिएको छ । हामी जीवनका लागि भन्दा जिब्रोकालागि बाँचेका छौं । हामीले पढेर, हाकिम भएर, ठूलो मान्छे भएर पनि आज जिब्रो माथि नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी आफैं इन्द्रियका दास भएर पनि अरुमाथि मालिक बन्ने सपना देख्न भने छोड्दैनौं । हाम्रो जिब्रो अनावश्यक नुन, खुर्सानी, मसला, अमिलो, अजिनो मोटो लगायतका पदार्थको प्रयोगका कारण संवेदनहीन भएको छ । दैनिक जसो मासुको आहारले हामी सागसब्जीको स्वाद थाहा नपाउने भएका छौं । हाम्रो पेटको संवेदना पनि मर्दै गएको छ । चुरोट, रक्सी, सुर्तीको सेवनले हाम्रा इन्द्रियहरू क्षतविक्षत भएका छन् । प्रकृतिले स्वस्थ, पवित्र र निर्मल दिएको शरीरलाई यति कुरुप, रुग्ण र विषाक्त बनाएर हामीले हाम्रो आफ्नै जीवनप्रति खेलबाड गरिरहेका छौं । यसमा सबैले सोंच्नु जरुरी छ । यदि हामीले हाम्रो जिब्रोलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने अधिकांश रोगहरु पनि शरीरमा देखापर्ने छैनन् ।
कतै हाम्रा रोगका कारणहरु यी पो हुन् कि ? एकपटक हेरौं त, जसलाई हामी नियन्त्रण गरी स्वस्थकर जीवनयापन गर्नसक्छौं कि ?
भोक नलागे पनि भोजन गर्नु तथा भोजन नचबाईकन खानु,
प्रकृतिको प्रतिकूल आहार गर्नु,
भोक भन्दा धेरै भोजन गर्नु वा घरी घरी खाइरहनु,
स्वादको बसमा परी तयारी खाना, तारेका तथा बढी पिरो, अमिलो, गुलियो जस्ता खाना, केक, कफी, चिया, पाउरोटी आदिको अधिक सेवन गर्नु,
तनाव, उत्तेजना, क्रोध, चिन्ता तथा घृणाको स्थितिमा भोजन गर्नु,
शारीरिक श्रमको अभाव तथा ज्यादा श्रमको असंयमित जीवनयापन गर्नु,
राती ढिलो सुत्नु तथा बिहान ढिलो उठ्नु,
मांसाहार र मदिरा तथा दुव्र्यसन (तमाखु, खैनी, सुर्ति, चुरोट, सुपारी, पान आदि) को सेवन गर्नु,
योग, प्राणायाम तथा आध्यात्मिक मार्ग रहित जीवन व्यतित गर्नु,
प्रकृतिको स्वभाविक धर्मलाई रोक्नु तथा परिवर्तन गर्नु, जस्तै ः स्त्रीहरूको मासिक धर्म रोक्नु, दिशा पिसाबको वेग रोक्नु, भोक, निद्रा, प्यास, आँसु, हाच्छ्युँ, हाँसो, हाइ, वीर्य आदिको वेग रोक्नु,
एकै खालको भोजन धेरै दिनसम्म सेवन गर्नु आदि ।
उसो भए हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा कसरी परिवर्तन ल्याउने वा दिनचर्या कसरी बिताउने ?
सातामा ५० घण्टा भन्दा बढी काम गर्ने मानिसको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँदै जान्छ । त्यसकारण काम र आराम दुवै एकैसाथ हुनुपर्दछ । यसबाट कार्यक्षमता पनि बढ्छ भने अनेक खालका रोगहरूबाट समेत मुक्ति मिल्दछ । यसको लागि सप्ताहन्त निम्न तरीकाहरू अपनाई बिताउन सकिन्छ ।
सधैं एकै समयमा उठ्ने,
बिहानको समय आफ्ना लागि पनि छुट्याउने,
कार्यालयको काम घरमा नलग्ने,
हरेक साता एकै किसिमको काम नगरी फरक काम गर्ने,
दिनहुँ व्यायाम गर्न नछुटाउने,
साताभरका कुराहरु सोंचेर समीक्षा गर्ने,
परिवारसँग समय बिताउने र
आउने साताको तयारी गर्ने आदि ।
स्वस्थकर जीवनशैलीका लागि तनाव व्यवस्थापन पनि गर्ने कि ?
यदि कुनै मानिसले उत्तम स्वास्थ्यको इच्छा राख्छ भने उसले आफ्नो मनमा रोगको विचार आउन दिनुहुँदैन । यदि तपाईं तपाईंको मनोबल कमजोर नहोस् भन्ने चाहनु हुन्छ भने आफ्नो मनोवृत्तिलाई स्वस्थ बनाउनुहोस्, आफ्नो मनलाई प्रसन्न राख्नुहोस् तथा यसलाई बेचैन हुन नदिनुहोस् । यदि तपाईं मानसिक रुपमा स्वस्थ बन्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम आफ्नो मनमा विश्वास जमाउनुस् तपाईं रोगग्रस्त हुनुहुने छैन । आफ्नो दृढ संकल्पद्वारा तपाईं जे चाहनुहुन्छ त्यही बन्न सक्नुहुन्छ, जे चाहनुहुन्छ त्यही पाउन सक्नुहुन्छ । सधैं आफूलाई स्वस्थ सम्झनुुस्, बिर्सेर पनि रोग अथवा निर्बलताको विचार आफ्नो छेउमा पर्न नदिनुस् ।
सम्पूर्ण शरीर क्रियाशील बनाउन योग अभ्यास पनि शुरु गर्ने कि ?
आजको युगमा योग बिस्तारै मानिसको जीवनशैली बनिरहेको छ । निको नहुने रोग लागेर माया मारेको अवस्थामा पनि नियमित योगाभ्यासका कारण पूर्ण रुपमा निदान हुनुका साथै शरीरले संजीवनी पाएको भेटाईन्छ । योगविज्ञानले चिकित्सा विज्ञानलाई समेत ठूलो चुनौती दिएको पाइन्छ । योग आजका मानिसका लागि वरदान सावित भएको छ । स्वामी रामदेवले त योगसाधनाबाट भाँचिएका र काटिएका बाहेक सबै रोगहरु निको हुन्छन् भन्नुभएको छ । योगविद्या जटिल विषय पनि होइन जुन सजिलै जो कोहीले पनि गर्न सक्छ । योगका सुक्ष्म क्रियाहरु गर्नाले हाम्रा सुक्ष्म स्नायु प्रणालीहरु चुस्त हुन्छन्, नयाँ शक्तिको विकास हुन्छ, राम्रो रक्तसंचार हुन्छ र यावत किसिमका रोगहरु निको हुन्छन् । योग अभ्यासले पाचनयन्त्र स्वस्थ हुँदा सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ, हल्का तथा स्फूर्त बन्दछ । यसैगरी मुटु, प्यांक्रियाज, फोक्सो लगायत मनमा समेत सुधार आई आनन्दमय, शान्तिप्रिय र परम चैतन्य प्राप्त हुन्छ ।
सारांशमा, सबै सुखको आधार भनेको सु–स्वास्थ्य नै हो । स्वस्थ शरीर र मनका लागि मुख्यगरी निम्न प्रकारका स्तम्भहरु हुन्छन् । ती हुन्– आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, स्नान र ध्यान । यी कुराहरुलाई हामीले दैनिक जीवनमा अपनाउन सक्यौं भने हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन आई सदा सुखी र स्वस्थ हुन सकिन्छ । जसको छोंटो चर्चा यहाँ गर्न सकिन्छ ।
१) आहार ः मानव शरीरको निर्माण मात्र नभइ दैनिक शरीर संचालन गर्ने मुख्य कुरा नै आहार हो । जसले आफ्नो शरीरको प्रकृतिलाई बुझेर हितकारी तथा समयअनुसारको खाना खान्छ उसको शरीर स्वस्थ रहन्छ । बिहान ८ बजेदेखि ९ बजेसम्म पेय वा फलफूलहरु, ११ देखि १२ बजेसम्म खाना, बेलुका ९ बजेभित्र खाना खाने बानी बसाल्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ । खाना खानेबेलामा मौन भई बेसरी चपाएर खाने, खाना खाँदा पानी नपिउने, खानामा खनिज तत्व, लवण, भिटामिन भएको शाकाहारी खाना खाने गरेमा शरीरलाई निकै फाइदा पुग्छ ।
२) निद्रा ः पूर्ण सुखानुभूतिको माध्यम वा स्वास्थ्यको साथी नै निद्रा हो । एउटा स्वस्थ व्यक्तिको लागि कम्तीमा दिनहुँ ६ वा ७ घण्टा सुत्नु आवश्यक पर्दछ तर यो उमेर अनुसार फरक हुन्छ । बेलुका चाँडै सुत्ने र बिहान चाँडै उठ्ने बानी नै शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको सूचक हो । पुरा निद्रा पुगेन भने शारीरिक तथा मानसिक विकासमा अवरोध आउँछ । निद्रा एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जसले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गराउँछ । कम निद्रा लाग्नु पनि रोगको लक्षण हुनसक्छ । त्यसकारण आवश्यकता अनुसार सुत्नुपर्छ जसले स्वस्थ राख्न मद्धत गर्छ ।
३) ब्रह्मचर्य ः आफ्ना इन्द्रियहरुलाई वशमा राख्दै एकाग्र मनले ध्यान गर्नु, मनलाई परोपकारमा लगाउनु नै ब्रह्मचर्य हो । अथवा मन र इन्द्रिय शक्तिहरुको रुपान्तरण गर्दै तिनीहरुलाई आत्मकृत बनाउँदै ब्रह्मको प्राप्ति गर्नु नै ब्रह्मचर्य हो । यसबाट स्वस्थता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
४) व्यायाम ः शरीर संचालनका लागि खानाको आवश्यकता परे झैं शरीर स्वस्थ राख्न आसन, प्राणायाम जस्ता व्यायामको जरुरत पर्दछ । नियमित रुपमा व्यायाम गर्नाले दुर्बल, रोगी तथा कुरुप व्यक्ति पनि बलवान, स्वस्थ र सुन्दर बन्दछ । शारीरिक श्रम तथा व्यायामको अभावले मुटुरोग, मधुमेह, मोटोपन, बातरोग, रक्तचाप तथा मानसिक तनाव जस्ता आदि रोगहरुले मानव शरीरलाई ग्रस्त पार्दछ । यसैले पूर्ण आरोग्यता प्राप्त गर्नका लागि नियमित रुपमा योगाभ्यास गर्नु जरुरी छ ।
५) स्नान ः शरीरमा ताजापन र स्फूर्ति ल्याउन, अनावश्यक वस्तुहरु शरीरबाट फ्याँक्न र शरीरलाई शुद्ध तथा हल्का बनाउन दिनहुँ स्नान गर्नुपर्दछ । शरीरको अवस्था हेरी कहिलेकाहीं तातो पानीको प्रयोग गरी नुहाउने गर्नुपर्छ भने अन्य अवस्थामा नुहाउँदा प्रायः चिसो पानी नै उपयुक्त हुन्छ ।
६) ध्यान ः बिहानको नित्यकर्म पछि हरेक दिन १५ मिनेटदेखि १ घण्टासम्म ध्यान तथा उपासना गर्नाले सुख, शान्ति र आनन्द मिल्दछ । यसबाट मानसिक समस्याहरु समेत समाधान हुन्छन् ।
माथि उल्लेखित उपायहरु नै समग्रमा जीवनशैली परिवर्तन गर्ने उपायहरु हुन् । यदि यस्ता उपायहरु हामीले हाम्रो जीवनमा लागु गर्न सक्यौं भने पक्कैपनि हामी स्वस्थ भई दीर्घजीवी बन्न सक्नेछौं ।
(लेखक सेवानिवृत्त जनस्वास्थ्य निरीक्षक हुन्)
दादुरा रुवेला रोग निवारण सम्बन्धि विशेष अभियान सञ्चालन ।।
दुखद खबर वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन(भिडियो सहित)
किशोरी सुरक्षाको लागि किशोरीमा लगानी
देवचुली १७, किशोरी अभियन्ता
एक वर्षको समृद्धी चाहनु हुुन्छ भने अन्न रौपौ ।
दश वर्षको समृद्धी चाहनु हुन्छ भने रुख रुपौ ।
यो चिनियाँ उखानबाट नै सुरु गर्न चाहे, हामीले खोजेको समाज र समृद्धको यात्रामा हाम्रो अवस्था कहाँ छ ? प्रत्येक दिन जसो आउने समाचारहरुमा किशोरीहरुमाथी भएको हिंसा, दृव्र्यवहार, बेचबिखनका घट्नाले म जस्ता किशोरीहरुको मस्तिष्क मा के कुरा खेल्दछ होला ?
नेपालमा किशोरीहरुको अवस्था जनसाख्यिक रुपमा चाँही कस्तो छहोला त ? जनसंख्याको हिसावले हेर्दा पनि नेपालको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत १८ बर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुको रहेको छ । बालबालिकाको कुल जनसंख्याको ४९ प्रतिशत संख्या बालिकाहरुको रहेको छ । जनगणना प्रक्षेपणले सन् २०१६ मा १९ बर्ष भन्दा कम उमेरका करिब ५८ लाख ६६ हजार बालिकाहरु नेपालमा रहेको देखाउँछ । यसरी हेर्दा पनि किशोरीहरुको अवस्था अनुसार नै कार्यहरु भएका छन् त ? अनी अहीलेको वर्तमान समयमा गरिएका लगानीका क्रियाकलापहरुको अवस्था भने कस्तो छ भन्ने बारेमा समेत हामीले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
हामी किशोरीहरुले आफ्नो जीवनमा केही न केही समस्याहरुबाट पिडित हुन्छौ । देश भित्र र बाहीर समय समयमा सुन्ने गरेको फलानो ठाँउमा यो भयो, यस्तो समस्याहरु आयो ? अनि अभिभावक र समुदायबाट समेत यो उमेरमा भएका किशोरीहरु आफै नराम्रो बाटोमा लाग्दछन की ? कतै हिंसा वा दृव्र्यवहारमा नै पर्दछन की ? त्यही कारणले पनि म जस्ता हजारौ किशोरीहरु बाहीर कुनै पनि स्थानमा आवतवावत गर्नलाई समेत समस्याहरु पर्ने गरेको छ । कहीले काँही त लाग्दछ म साच्चिकै केटी भएर किन जन्मेको होला ? कतै हामीले केटी भएर जन्म लिएर कुनै ठुलो पाप त गरेका छैनौ ? आखिर किन पल पलमा हामी बालिका र किशोरीहरुमा नै यस्तो समस्याहरु आउने गरेको छ त ? आखिर हामी किशोरीहरुको दोष नहुँदा पनि त निर्मला पन्त जस्ता घटनाहरु बारम्बार हुने गरेको छ ?
यस्ता समस्याहरु र घटनाहरु सुन्दा म आफु र मेरा साथिहरु पनि असुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छौ । हामीलाई पनि त आफ्ना मनमा लागेका कुराहरु सोध्न मन लागेको हुन्छ ? हामीलाई पनि त बालकहरु सरह नै खेलकुद र अन्य क्रियाकलापहरुमा सहभागिता हुन मन लागेको हुन्छ ? तर दैनिक जसो हुने यस्ता घटनाहरुले हामी स्वयम बालिकाहरुले एकदमै डर, चिन्ता र त्रासमा जीवन व्यतित गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी स्वयम किशोरीहरुलाई यस्ता समस्याहरु र आफ्ना कुराहरु विद्यालयमा वा घरमा वा अन्य ठुला मानिसहरुलाई सोध्न मन लागेको हुन्छ तर सोध्यो भने कतै हामीलाई नै पो गलत पो सोच्छन की ? किन जान्ने भएकी होला भन्छन की ? कतै हामीलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण नै त्यस्तै गर्दछन की भनेर पनि सोध्न भने सकेका हुँदैनौ । तर हामीले किशोरीहरुको समुह बनाएर किशोरी शसक्तिकरणको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएपछि भने यस्ता बिभिन्न विषयहरुको बारेमा जानकारी लिन र एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयका साथीहरु, सरहरु र अन्य व्यक्तिहरुलाई सोध्न सक्ने भएका छौ । महिनामा एक एक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने र त्यसको समिक्षाको लागि प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिवार बैठक बस्नाले समेत आजकल धेरै प्रश्नहरुको उत्तर थाहा पाएका छौ, साथै कसरी किशोरीहरुलाई सुरक्षित गर्न सकीन्छ भन्ने बारेमा समेत जानकारी लिन र जानकारी दिन थालिएको छ ।
किशोरीहरु माथि भएको यो सवै समस्याहरुको समाधान एउटा मात्र उपायले गर्न सक्दछ, त्यो भनेको किशोरीहरुमाथीको लगानी र उनीहरुको शसक्तिकरण साँचो अर्थमा सम्पन्न गर्न सकेमा । यसको लागि हामीले ३ तहबाट शसक्तिकरण र लगानीको सुनिश्चितता गर्न सकीयो भने किशोरीहरुमाथि भएका बिभिन्न हिंसा, दृव्र्यवहार घटद्छ जस्तो लाग्दछ ।
१. स्वयम किशोरीहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरु ः हामी किशोरीहरुले समेत अधिकारको बारेमा कुरा गरिरहँदा कर्तव्य पनि सँगै लैजानु आवश्यकता हो । हामी स्वयम किशोरीहरुले आफ्नो विकासको लागि गर्नुपर्ने विषयहरुसँगै समाजको निश्चित नियम र परिधीलाई पनि त सँगै लैजानु पर्दछ नी । यसको लागि हामीले अधिकारको मात्र कुरा गरेर भएन हामीले कर्तव्य पनि सँगै लगेर परिवार, समुदाय र राष्ट्रप्रतिको ध्यानाकर्षण अगाडी बढाउनु आवश्यक छ । हाम्रो प्रथम अधिकार विद्यालयमा वा कलेजबाट शिक्षा हासिल गर्न पाउने हो भने हामीले आफ्नो कर्तव्य पनि विद्यालयको अनुशासन र पढाईलाई नियमितता गराउनु पनि त हो, त्यसकारण हामी सवै किशोरीहरुले आफ्नो अभिभावको अवस्था, समय र उपलब्धतालाई ध्यान दिएर अध्ययन र आफ्नो विकासको साथै घरमा र बाहीर रहेका आफुभन्दा सानालाई माया र ठुलालाई आदरसत्कार गर्नु पर्दछ । अनी आफुलाई केही समस्याहरु परेको छ भने आफ्नो घरका अभिभावक, साथीहरु र विद्यालयका शिक्षकहरुलाई समयमा नै जानकारी गराउनुपर्दछ ।
२. अभिभावक र समुदायहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरु ः हामी किशोरीहरुको सवैभन्दा नजिकको साथी भनेको नै घरमा रहेको अभिभावकहरु नै हुुनुहुन्छ । तर पछिल्लो समयमा किशोरीहरु घरमा नै सुरक्षित नभएकोले समेत अभिभावक र समुदायको पनि केही जिम्मेवारी त हुनुपर्दछ नी । त्यसको लागि अभिभावकहरुले आफ्ना छोरीहरु किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेलगत्तै उनीहरुसँग साथी जस्तो व्यवहार गर्न सक्नुपर्दछ । यसो गर्दा किशोरीहरुलाई लागेको कुुराहरु निर्धकताका साथ घरमा नै आएर घरका सदस्यहरुलाई भन्न सकुन । घरमा किशोरीहरुलाई पर्याप्त समय दिन सकेमा र उनको नजिकका साथीहरु र विद्यालयका साथीहरु समेतलाई भेट्ने र संगत कस्तो छ भन्ने बारेमा समेत थाहा पाउनुपर्दछ । घर किशोरीमैत्री र बालमैत्री सँगै समुदाय पनि सोही अनुसार अगाडी बढ्न सकेमा किशोरीहरुले समेत सुरक्षित महसुस गर्दछीन । यसको लागि समुदायले समेत आचारसँहीताहरुको निर्माण गर्ने र आफ्नो समुदायमा हुन सक्ने संभावीत घटनाहरुको पूर्वमुल्याँकन गरी सो न्युनिकरणको लागि कार्यहरु गर्न सकेमा राम्रो हुने थियो । जस्तो सार्वजनिक स्थान वरपर धुम्रपान र मधपान निषेधित क्षेत्र, हिंसा, दृव्यर्वहारको व्यवहार गर्नेलाई तत्काल कारवाहीको व्यवस्था, किशोरीमैत्री पूर्वाधारहरुको निर्माण, बिभिन्न सुचनामुलक सन्देशहरु प्रदान गर्नको लागि सुचनापेटीहरु, होडिंङ्ग बोर्डहरुको निर्माण र ठाँउ ठाँउमा राख्नाले समेत यस्ता घटनाहरुमा न्युनीकरण ल्याउँदछ । साथै सामाजिक विकास र अन्य क्रियाकलापहरुमा समेत उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चितता गराउने, मनोरञ्जनस्थलको निर्माण, किशोरीमैत्री खेलकुदको सञ्चालन आदी क्रियाकलापहरु समेत समुदायले सञ्चालन गर्न सकेमा हिंसा र दृव्र्यवहारबाट जोगीन सक्ने थिए ।
३. स्थानीय तह र अन्य संस्थाहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरु ः हामीले अहीले आफ्नै वडामा, गाँउपालिकामा र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधीहरु पाएका छौ । तपाईहरु म जस्ता हजारौ किशोरीहरुको आफ्नै नातेदार पनि त हुनुहुन्छ, एकपटक हजुरहरुले सोच्नुस त म जस्ता किशोरीहरुले तपाईको स्थानीय तहमा भोगेका समस्याहरु के के होलान ? कसरी त्यो समाधान गर्न सकीएला हामी सवै बसेर छलफल गर्ने हो भने पक्कै नै त्यो समाधान त हुन्छ होला नी है । हाम्रो लागि तपाईहरुले किशोरीमैत्री पूर्वाधारहरु, हाम्रो क्षमताको विकासको लागि आवश्यक पर्ने बिभिन्न तालिमहरु, सार्वजनिक स्थानहरु, मनोरञ्जन स्थलहरु, खेल मैदानहरुको व्यवस्थापन, हामी सहभागी भएर आफ्ना कुराहरु राख्ने संरचनाहरु, हिंसामा परिहालेमा समेत मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्थापन, महिनावारी भएको समयमा प्रयोग गर्न सकीने शौचालयहरु, सेनेटरी प्याडहरुको व्यवस्थापन पनि त यहाँहरुले गर्न सक्नुहुनेछ । यदी यो सम्मको अवस्था सृजना गर्न सक्नु भयो भने हामी सवै किशोरीहरु सुरक्षित महसुस गरी यो देशको परिवर्तनमा लाग्ने थियौ नी त ।
किशोरीहरुमा गरिएको क्रियाकलापहरु खर्च नभएर यो त लगानी हो, जसरी कुनै व्यवसायमा लगानी गरेपश्चात केही समयमा हामीले प्रतिफल पाउँछौ भने, हामीलाई गरीएको क्रियाकलापहरुले पनि त कुनै समयमा यो देशलाई हामीले प्रतिफल दिने छौ । भनिन्छ नी आमा शिक्षित भईन भने त्यो घर नै शिक्षित हुन्छ भने झै म जस्ता हजारौ किशोरीहरुको सुरक्षा अहीले गर्न सकीयो भने त यो देश पनि त समृद्ध र शान्त हुनेछ होला । आउनुहोस किशोरीहरुमा सही समयमा नै लगानी गरौ । हिंसामुक्त समाजको निर्माण गरौ । जय किशोरी
कुर्सी बदली भयो ,मन्त्र बदली भयो ,तर तन्त्र बदली भएन !
लेखक: टिकाराम वली
दशकौं लादिएको निरंकुश पञ्चायत ढाल्न हजारौंले प्राणको आहुति दिएकै हो । त्यही बलिदानको बलमा प्रजातन्त्र आयो भनेर बजारमा राम्रो बिज्ञापन आएकै थियो । तर नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको स्वाद लिएपछि नै थाहा भयो प्रजातन्त्र पनि राजसंस्था कै मातहतमा हुर्काउन खोजिएको नाममात्रको प्रजातन्त्र रहेछ ।बाहिर बोरा राम्रो भएर के भयो र बोरा भित्र कुहिएको आलु मात्र थियो । त्यही अत्याचारी प्रजातन्त्रको विरुद्ध सुरु भएको जनयुद्ध २०५२ साल फागुनबाट विकट गाउँघरबाट सुरु भयो। दश वर्ष चलेको सशस्त्र जनयुद्धको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सब्दजाल भित्र पनि संसदीय प्रजातन्त्रभन्दा माथि उठ्न सकेन। १७ हजार भन्दा धेरैको बलिदानीले भिजेको संविधान आज त्यही संसदीय व्यवस्था कै निम्ति हराएको इतिहास बन्यो । जनयुद्धको अन्त्य र संसदीय व्यवस्थाको स्थापना कम्युनिस्ट आन्दोलन गम्भीर असफल अभ्यास थियो ?लाखौं जनताको दमदार आन्दोलन र। हजारौं शहिदले सजिएको गणतन्त्रको परीक्षण पनि भै सक्यो ।समय कालखण्ड बद्लिए, तन्त्र बद्लिए कुर्सीमा पुग्ने ब्यक्ति बदलिए ।तर ति कुर्सी र तन्त्रहरुको व्याख्या अपव्याख्या गर्ने पात्रहरु भने सदियौं देखि उही नै रहे। त्यही बर्गको कुर्सी रह्यो जसको विरुद्ध हजारौंको बलिदान भएको छ ।जसको विरुद्ध लाखौं मान्छे अङभङग छन् ।
संकटकाल लगाउने र सर्वहारा बर्गको राज्य माग्नेहरु नेपाली राजनीतिमा सक्रिय नै देखिन्छन्। अझ जनयुद्ध संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन दबाउन सिधासिधा बन्दुक दाब्नेहरु ससम्मान पदकबाट विभूषित भएका छन्। तक्मा दिनेहरु गणतन्त्रको माग गर्नेहरु पात्रहरु हुन् । तिनै पात्र हुन् जसले गणतन्त्र र संविधानसभाको नेतृत्व गरेको दावी गर्छन्। एक तन्त्रबाट अर्को तन्त्रको फड्को एक ब्यक्तिको सट्टा आर्को प्रधानमन्त्री ।बन्नु बाहेक खासै परिवर्तन भएन । खासमा चाहिएको व्यवस्था परिवर्तन हो । मानव समाजवाद हो । अहिले बद्लिएका फगत भासण भासण भित्रको अनेक अर्थ मात्र भयो ।हरेकले जालझेल र अनेक अर्थ लगाउन सक्ने आलुको बोराभित्र कुहिएको गन्ध मात्र आउछ । हामीले मुलुक हाँक्न कथित पात्रहरुलाई दिएको प्रजातन्त्र र त्यसको जगमा पलाएको गणतन्त्र पनि जालझेल र षड्यन्त्र मै भुलेको छ ।हामी धेरै आक्रोशमा थियो ।बिहान नहुदै हातमुख नधुदै हत्तारिएर निरंकुश व्यवस्था विरुद्ध कतै कालो झण्डा फर्फराउँदै गोली खान अघि बढ्यो कतै बम गोलि र गोलि कठ्ठा सहित भीषण लडाइ चल्यो।
मेरो मन दुखाइ आन्दोलन संघर्ष र बलिदानमा कदापि होइन । सानो बाल्यकालकाल बाट पाएको बिद्रोहि शिक्षा भित्र मानवजातिको सुन्दर सपना भित्र हराएर । अहिले पुजीवादी समाजमा बाच्नु पार्ने बाध्यता सामन्य छैन । सानै उमेर देखी बिद्रोह र न्यायको लागी गरिएको अनेक लक्ष्य भित्र देखिएको साम्यवाद हराएको सुन्दा मनका काँडा बिजेको
छ। चित्त दुखेको छ। अनि आक्रोश पोख्न मन लाग्छ ।त्यो भर्भराउँदो जीवन कसै मन्त्री बन्नको लागी मात्र थिएन । पद र पैसाको ब्यापार गर्नको लागी पनि थिएन ।त्यसकारण अनेकौं प्रश्न सोध्न मन लाग्छ। राजनीतिक जिबन समाजको सेवा भित्र पाएको पद हो । त्यही पद र त्यही सेवाबाट पाएको सम्मान मन्त्री हो । अब त्यहाँबाट पाउने अधिकार दुरुपयोग नहोस् भन्ने आम नागरिकको चाहना हुन्छ नै ।आज अस्पतालमा उपचार भन्दा पहिला पैसा जम्मा गर्नु पर्छ।स्कुलमा किताब भन्दा पहिला पैसा बुझाएको हुनुपर्छ ।ठाउँ ठाउँमामा विकास बजेट काम सुरु नहुदै सिधिन्छ । कुन जिज खान र उपयोग उपयुक्त होला भनेर खोजतलास भयो भन्ने । जहाँ घुसपैठ भित्र पास भएको छ ।बाहिर त्यही ठिक हुन्छ । सडक सानो छ ।कस्तो सवारी कतिबेला चलाउनु पर्छ ।भन्ने ध्यान नै छैन । जति लोड संग भएपनि पावर र पैसा संग जतासुकै गुड्ने इजाजत पाउछ । अनि हामीले आलोचना गर्दा नराम्रो लाग्छ होला । त्यो पदलाई केहि पात्रहरुले दिएको संमान भित्र रम्न मन लाग्छ होला । यदि माक्र्सवादी हो भन्ने सन्सार देख्न सक्छ ।यदि मानवीय प्रतिनिधि हो भन्ने सबैको सुन्न सक्छ । होइन यस्तै रह्यो भन्ने विकल्प खोज्ने अधिकार जनता संग छ ।लाखौं युवा सहज श्रमको प्रतीक्षामा लामो समय भै सक्यो । प्रत्येक महिना दिदि बहिनीमाथिको बलात्कार भै रहेको छ ।निर्मला पन्तको बलात्कार अझै सम्म पत्ता लाग्दैन ।सुन कान्ड भित्र गोरेको बयान कता हरायो ।सबै अपराध हराउँदै जाने हो भन्ने किन चाहियो संविधान,कानुन र सरकार ?
रजस्वालाको मेरो पहिलो अनुभव ः पिडा अनी खुसीको क्षण
किशोरी शसक्तिकरण कार्यक्रम अभियन्ता, देवचुली
हामी महिलाका आफ्नो जीवनमा एउटा न एउटा समस्याहरु अगाडी बढ्नुपर्ने रहेछ , त्यस्तैमा सुरुमा समस्या लागेको र पछि यसको महत्वको बारेमा थाहा भएको रजस्वाला हुँदाको मेरो पहिलो अनुभव आज लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
सृष्टिको जन्मदातृको रुपमा महिलाहरु रहेको र त्यही संरचनमा हुने रजस्वालाको विषयमा भने अचम्मको कुराहरु मात्र रहने र त्यो पनि महिलाहरुमा हुने रहेछ । म आफुलाई रजस्वालाको बारेमा खासै थाहा नै थिएन, घरमा हुनुभएका आमाहरु, दिदिहरु चाँही पर सरेको, छुन नहुने भन्ने त सुनेका थिए, तर के हो ? कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो समाजको संरचनाको कारण न त मैले नै कसैलाई सोध्न सके न त कसैले मलाई भन्न नै खोज्यो त्यसकारण पनि म यो कुरा कसैलाई पनि सोध्न भने सकेको थिईन । बालापनको स्वभाव न हो नयाँ कुरा जान्न खोज्ने, सिक्ने खोज्ने त्यही भएर नै म आफु पनि यसको बारेमा जान्न मन लागेको थियो ।
एक दिन हिम्मत गरेर ममीको छेउमा गएर ममीलाई सोधे ः ममी यो रजस्वाला भनेको के हो ? किन हजुर र दिदिहरु म्हिनामा एकपटक हामी भन्दा टाढा छुटै वस्नुहुन्छ भनेर सोध ? मेरो ममिले गाली नगरीकन हासेर जवाफ दिनुभयो, महिलाको लागि रजस्वाला भनेका गर्वको कुरा हो, यो भयो भने हामी भविष्यमा गएर यो सृष्टिकर्ताको रुपमा अगाडी बढ्छौ, हामी आमा बन्न सक्दछौ र यो प्राकृतिक नियम हो, अव तिमि पनि यो उमेरमा प्रबेश गर्दै छौ, तिमिलाई पनि त्यस्तो भयो भने नडराई मलाई आएर भन्नु है भन्नुभयो, अनी मैले पनि हुन्छ भनी यो कुरामा ध्यान दिन थाले ।
यो रजस्वाला सामान्यतया १२ वर्षको उमेर समुहबाट हुने गर्दो रहेछ । म त्यतीबेला कक्षा ६ मा अध्ययनरत थिए, मैले मेरा साथिहरुलाई समेत रजस्वालाको बारेमा भन्ने गरेको थिए । एक रात म घरमा वसी सवै परिवारसँग वसेर टेलिभिजन हेर्दै थिए, मलाई अकस्मात गाह्रो भयो र एकदम सन्चो नहोला जस्तो भएको थियो, तर मैले घरमा उक्त कुराहरु भन्न सकेकी थिईन । तर पछी खाना खाएर टेलिभिजन कोठामा आँउदा मैले लगाएको सुुरुवालमा रगत लागेको देखे र म कसैले थाहा नपाउने गरी बाहीर गए, त्यतीबेला एकदम डर समेत लाग्यो किनकी मलाई केही भयो की भनेर रुन पनि आयो र एक्लै वसेर रुन थाले । पछि ममीलाई बोलाएर मैले देखाए र भनेपछि उहाँले मलाई सम्झाएर अव तिमी पनि रजस्वाला हुन थालेउ, यो प्राकृतिक कुरा हो, तिमिले केही गल्ती गरेको होईन भनेपछी म अली ढुक्क भए । अनी ममीले मलाई त्यहाँबाट अर्को कोठामा लिएर जानुभयो र त्यहाँ नै राखेर तिमि बाहीर ननिस्क भन्नुभयो । अनी पछी थाहा भयो, म त्यो कोठामा ५ दिनसम्म एक्लै बस्नुपर्ने रे, बाहीर आउन नपाउने अनी विद्यालय पनि जान नपाउने भएपछी मलाई एकदम रुन समेत मन लाग्दथ्यो । मैले त्यतीबेला नै सोच्दथे, यदी यो महिलाको लागि महत्वपुर्ण हो भने कीन त हामीलाई बाहीर निस्कन नहुने, छोईन्छ भन्ने यस्तो सोच्दा बेला बेलामा म एक्लै नै रुन गर्दथे तर म विवश थिए हाम्रो समाजको संरचना र रीतिरिवाजले गर्दा म ५ दिनसम्म घरबाहीर ननिस्कीन एक्लै कोठामा मात्र वसे । ५ दिन सम्म स्कुल नजादा साथीहरुले के सोचे होलान, शिक्षकले के भन्ने होलान ? के भनेर जवाफ दिने भनेर समेत म एकदमै आत्तिने समेत गर्दथे । ५ दिन पछि बाहीर आँउदा सवैले मलाई तिमि ठुली भयौ अव भन्नुभयो, मलाई भने अचम्म लाग्दथ्यो किन यस्तो भनेको होलान ? आखिर मैले कतै केही गल्ती त गरेको छैन ? ५ दिन पछिको बाहीर निस्केपछी पनि २० दिनसम्म केही छुन नहुने रे, सुरु सुरुमा गाह्रो भयो तर पछि समस्याहरु समाधान भएपछी भने त्यस्तो केही महसुस भने भएन । पछि त प्रत्येक महिना हुँदा यसको बारेमा समेत जानकारी हुन थाल्यो र पछि त यसको बारेमा समेत खासै गाह्रो महसुुस भने भएको छैन । यसरी हेर्दा रजस्वाला हुनु भनेको प्राकृतिक कुरा हो र यसले कुनै पनि किशोरीहरुलाई केही असर पार्दैन भनेर घरपरिवार तहमा, विद्यालय तहमा र स्वयम साथिहरु विचमा नै कुराहरु गरिनु आजको आवश्यकता हो । समाजको विकासको क्रममा महिलाहरु र त्यसमाथि पनि किशोरीहरुलाई यसको बारेमा परेको प्रभावको बारेमा उनीहरुका अनुभवहरु सुनीनु आवश्यकता छ र साना साना किशोरीहरुलाई विद्यालयस्तर र घरपरिवार तहबाट नै यसको बारेमा जानकारी दिनु आवश्यक छ ।
रजस्वाला हुँदाको बखतमा गरिनुपर्ने सरसफाई र हेरचाहमा सवै सरोेकारवालाहरुको मुख्य रुपमा भुमिका हामीले देखेका छौ । म आफै स्वयम किशोरी भएर पनि होला, कहिले कहिले यहाँका भौतिक संरचनाहरु देख्दा भने किन होला, यो पुर्वाधारहरु किशोरीमैत्री बनाउन नसकिएको , किन कसैको पनि ध्यान यता तर्फ जादैन होला ? अहिले त स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीहरु पनि त आएका छन् अनी मुख्य रुपमा मुख्य पदमा एकजना महिला र वडास्तरको समितिमा पनि त महिलाहरुको सहभागिता त्यती धेरै भएको छ, तर पनि उहाँँहरुको ध्यान त्यतातर्फ किन गएको छैन खोई ? आशा गरौ सवै किशोरीहरुले अवको दिनमा यस्ता कुराहरुमा उहाँहरुको ध्यान जानेछ र सवै पुर्वाधारहरु किशोरीमैत्री, लैगिंकमैत्री, अपाँगमैत्री र बालमैत्री रुपमा निर्माण हुनेछ । समाजको सभ्यताको परिचय दिनको लागि पनि त अव त यि कुराहरुमा ध्यान दिनु आवश्यकता छ । हामी सवै मिलेर यो समाजलाई किशोरीमैत्री निर्माण गर्नुछ । सवैको चासो र ध्यान किशोरीमा दिनको लागि समेत अनुरोध छ । अहिले नेपालमा हामी जस्ता किशोरीहरुको सुरक्षामा निकै नै चुनौतीहरु आईपरेको हामीले देखेका छु । म एक किशोरीको नाताले पनि भन्न चाहन्छु की यस्ता घटनाहरु र आफुलाई लागेको कुराहरु सवै किशोरीहरुले बेलामा नै अभिभावकहरुलाई जानकारी गराउनुपर्दछ । रजस्वाला हुँदाको बखत कुनै पनि चाडपर्वको आउदा जुन खालको सोच हाम्रो रहेको छ त्यो नगरी सवै किशोरीहरु र महिलाहरुको प्राकृतिक कुरा भएकोले सो कुरामा ध्यान दिई सवैलाई समान रुपमा चाडपर्वमा समावेश गरे मात्र सक्षम बालिका अनी समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुनेछ ।